Akụkọ - Pump Syringe Pump For Electrospinning na Gịnị ka eji Electrospinning mee
Kedu ihe bụ electrospinning?
Electrospinning bụ usoro dị mfe ma dịkwa mma maka ịkwadebe nanomaterials, nke na -adabere na mgbagha electrostatic n'etiti ebubo elu iji nweta nanofibers na -aga n'ihu site na mmiri viscoelastic. Ka ọ dị ugbu a, ụdị ihe dị iche iche akwadebela ihe nanofiber nwere dayameta dị ka iri puku nanometer site na electrospinning, gụnyere oxides ọla, polymer organic, na ihe seramiiki. Na mgbakwunye na nanofibers siri ike nke nwere ihu dị larịị, electrospinning dịkwa mma maka ịkwadebe nanostructures nwere usoro pụrụ iche dị ka porous, oghere, isi-shei ma ọ bụ isi-n'ọbọ. Elu elu ma ọ bụ ime ụdị nanofibers ndị a nwere ike rụọ ọrụ nke ọma na usoro nke abụọ ma ọ bụ nanoparticles n'oge ma ọ bụ mgbe usoro elektrọniks gasịrị. Na mgbakwunye, enwere ike ikpokọta nanofibers electrospun n'ime ihe enyere n'iwu ma ọ bụ ihe owuwu site n'ịgbanwe nhazi ha, ịkpakọba, ma ọ bụ mpịachi, na electrospun nanofibers nwere uru nke obere pores, porosity dị elu, na nnukwu akụkụ elu. A na -eji ya n'ọtụtụ mpaghara dịka nchekwa gburugburu ebe obibi, nnyefe ọgwụ, injin anụ ahụ na ọgwụ mmegharị, akwa mara mma, ihe mkpali, mmetụta, owuwe ihe ubi/ntụgharị/nchekwa, biomedicine wdg.
Ihe mejupụtara mgbapụta sirinji na -ebute mmiri mmiri bụ moto ziri ezi, ngalaba ịnya ụgbọ ala, mkpanaka nkedo, mkpọchi mkpọchi na ihe nkwado, wdg, nke nwere ike ịga n'ihu na n'ihu.
A na-ejikọ mkpọchi mkpọchi ya na mkpanaka mkpanaka nke sirinji ka ọ kwagide ma ọ bụ dọpụta piston, ka ị wee nwee ike nweta nnyefe mmiri na-enweghị ntụpọ dị elu.
Mgbapụta mmiri ụlọ nyocha ihe ntụtụ maka electrospinning voltaji dị elu, Enwere ike iji mgbapụta sirinji ụlọ nyocha nke nwere ezigbo ihe nlele nwere sirinji nwere ikike 10 uL ruo 60 mL. O nwere ọwa 1, 2, 4, na 10 ịhọrọ site na, na -enweta otu usoro ọwa mmiri nke 0.184nl/min - 83ml/min. Anụ nnyefe.
Ntụle ntụnye akwadoro:
TYD01-01 (otu mgbapụta sirinji ọwa)
TYD01-02 (mgbapụta sirinji ọwa abụọ)
TYD03-01, nkenke dị elu otu mgbapụta sirinji ọwa
TYD02-10 pump mgbapụta sirinji ọwa iri)
Mgbapụta sirinji laboratary nwere ike ikpokọta nha nke sirinji, họrọ ụdị ọrụ dị iche iche dịka ihe achọrọ si dị.
Ngosipụta LCD nwere agba dị elu, ọrụ ihuenyo mmetụ dabara adaba yana ngwa ngwa setịpụrụ.
Ọtụtụ ọkụ na-egosi n'ụzọ doro anya ọnọdụ ọrụ ya, yana sirinji dị iche iche arụnyere dị mma ịhọrọ ndị na-ere ahịa na nkọwapụta.
Prestore ọtụtụ igwe data iji mezuo ihe achọrọ maka nnwale nnwale dị iche iche.
Ọ nwekwara ụlọ ọrụ na -ahụ maka nchekwa na ụlọ ọrụ nchebe yana usoro mkpu.
Na-akwado nkwukọrịta RS485, dakọtara na ụkpụrụ MODBUS, ma nwee ike jiri kọmputa, PLCs, na kọmpụta nwere naanị kọmpụta njikwa akpaaka.
Jaketị igwe zuru oke, ntinye ike dị iche iche, na -emegharị maka oge dị iche iche.
Ọ na -etinye nnyefe olu micro micro, nnyefe micro na -asọba, enweghị nnyefe akwara.
Kedu ihe a na -eji electrospinning eme?
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, site na nyocha miri emi na-aga n'ihu na teknụzụ electrospinning, teknụzụ elektrọnik enwetawo nlebara anya n'ọtụtụ mpaghara nyocha, ọkachasị na ngalaba biomedicine, nchekwa ike, nhicha gburugburu na catalysis. Electrospinning N'ihi ọtụtụ uru ya, teknụzụ ejirila nwayọọ nwayọọ bụrụ teknụzụ dị mkpa maka ịkwadebe nanomaterials nwere otu akụkụ. Ngwa na ngalaba nke gburugburu ebe obibi ochichi, electrostatic nanofibers e ọtụtụ-eji nsị filtration, ikuku ọcha na ndu filtration, wdg Pharmaceutical ngwa, ngwa nke electrospinning na ọgwụ nnyefe tumadi na-agụnye mgbochi mkpali, mgbochi oxidant, mgbochi akpụ, na ihe ndị na -arụsi ọrụ ike nke ọgwụ ọdịnala China.
Baoding Lead Fluid Technology Co., Ltd. na-elekwasị anya na imewe, mmepe, imepụta na ire ahịa nke nfuli peristaltic na nfuli sirinji nke ọma, ma gbaa mbọ na-enye ndị ọrụ ngwaahịa dị elu na ọrụ teknụzụ zuru oke. Na mgbakwunye na inwe usoro zuru oke nke nfuli peristaltic na ahịrị ngwaahịa mgbapụta sirinji, Mmiri ndu nwekwara ike nye ọrụ OEM ahaziri dịka mkpa onye ọrụ si dị. Ahụmịhe mmepe ngwaahịa zuru oke nke tozuru oke nwere ike inye gị ntuziaka ngwa ngwa yana ntinye maka nfuli peristaltic na nfuli sirinji, ma nye ndị ọrụ ezigbo mma, nkenke dị oke ọnụ, yana ọnụ ahịa nnyefe mmiri dị ọnụ ala.